Nico Nico Douga Downloader - Ukulanda kwamahhala amavidiyo we-anime kusuka kuNiconico
Usebenzisa uhlobo oludala. Chofoza lapha ukufaka inguqulo yakamuva 2.0.1
❝Ukulanda kwamahhala amavidiyo we-anime kusuka kuNiconico❞
➶ Leli sayithi likuvumela ukuthi ulande noma yimaphi amavidiyo eNiconico ngokufaka i-URL yevidiyo.
Kopisha i-URL yevidiyo bese uyinamathisela ebhokisini elingenhla, lapho-ke uNiconico wokulanda uzothola ividiyo ngokushesha. Qhafaza kwesokudla kusixhumanisi sokulanda bese ugcine amavidiyo eNiconico kudiski yasendaweni.
Isilayidi esilula seNicoNico
Lesi sandiso sikuvumela ukuba ulande amavidiyo, alalelwayo, izithombe ezivela ku-NicoNico. ➥ Faka manje
Ungawalanda kanjani amavidiyo we-NicoNico
Ngingasho ukuthi nawe ungumlandeli omkhulu weNiconico anime ngoba uthole indlela yakho lapha. INiconico iyipulatifomu enhle yokwabelana ngamavidiyo aseJapan, enikeza izinkulungwane zamavidiyo athokozisayo futhi amangalisayo. Kodwa-ke, singabukela amavidiyo amaNiconico online kuphela futhi kunzima ukulanda ividiyo nomsindo weNiconico ngezindlela ezisemthethweni. Ngaleso sizathu, sikunikeza ukuthi ungalanda kanjani ividiyo kaNiconico nomsindo ngeNiconico Video Online Downloader engcono kakhulu.
Faka i-URL yevidiyo yeNicoNico bese uqhafaza inkinobho yokulanda.
Uzobona uhlu lwazo zonke izixhumanisi ezitholakalayo.
Khetha ifomethi nekhwalithi bese uthokozela amavidiyo angaxhunyiwe ku-inthanethi!
Amahhala Ukulanda kwamahhala kusuka eNiconico ngeBrowser Extension / Isengezo
Vula iwebhusayithi yeNicovideo.
Dlala ividiyo ku-NicoNico. Shintsha ikhwalithi yevidiyo kusidlali ukuze uthole isixhumanisi sokulanda.
Vula lesi sandiso.
Linda izikhathi ezimbalwa.
Chofoza kwikhwalithi ofuna ukuyilanda.
Kuthebhu entsha, ifayela lizolanda ngokuzenzakalelayo bese liligcina kudivayisi yakho.
INiconico, ngaphambili eyayaziwa njengeNico Nico Douga, isayithi elidumile lokusakazwa kwamavidiyo aseJapan lapho lineziteshi eziningi zevidiyo, njengezokuzijabulisa, umculo, impilo, ezemidlalo, i-anime, ubuciko, imidlalo nokunye. Ngaphezu kokubuka, ukulayisha, nokwabelana ngamavidiyo, ukugqamisa kweNicovideo ukuthi kuvumela abasebenzisi ababhalisiwe ukuthumela isikrini, izichasiselo zinamekwe ngqo kuvidiyo futhi zivumelaniswa nesikhathi sokudlala esithile, okuholela emkhakheni wefashini.
Okulandwayo kwevidiyo kaNiconico
INiconico (nicovideo.jp) yenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu ngamaJapane zokwabelana ngamavidiyo. Senze umzamo omkhulu kule Nicovideo Downloader, yingakho ungalanda noma iyiphi ividiyo kusuka eNiconico ngemizuzwana. Uyacelwa uqaphele ukuthi wonke amafayela alandiwe awokuzisebenzisela yena kuphela.
Landa ividiyo ephezulu
Landa amavidiyo avela kuNiconico ngekhwalithi ephezulu. Landa ama-movie we-Anime wamahhala namavidiyo e-Anime kusuka ku-NicoVideo ngaphandle kokuhlupheka.
Thola amavidiyo akho owathandayo
Thayipha amagama angokhiye kubha yokusesha, kuzovela ividiyo yeNiconico. Gcina amavidiyo wakho owathandayo weNiconico ukuze uwasebenzise ungaxhunyiwe ku-inthanethi ngala mathuluzi alula.
Kuphephile ngokuphelele futhi kukhululekile ukukusebenzisa
Ngeke ucelwe ukuthi ukhokhe imali, bhalisa noma ufake uhlelo olwengeziwe. Akunakuphuka, akukho gciwane, indawo ihlanzekile ngokuphelele.
Sebenza kahle kunoma yisiphi isiphequluli
INiconico Downloader isebenza kahle kuGoogle Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser kanye nanoma yiziphi iziphequluli zewebhu. Ngaphezu kwalokho, iyahambelana kakhulu nohlelo lokusebenza lweMac.
I-NicoNico Audio Extractor
Khipha umsindo ku-Nico Nico Douga bese uwugcina.
Landa isithonjana seNicoNico
Landa i-NicoNico isithombe sesikrini esingu-720p ephelele.
Thola Imibuzo Yakho Nezimpendulo Lapha - Ungalanda kanjani amavidiyo we-NicoNico?
+ Uyini uNicoVideo?
UNiconico (owaziwa nangokuthi yiNicoVideo noma uNikoniko) phambilini wabizwa ngoNico Nico Douga. Kuyafana ne-YouTube, yindawo yokwabelana ngevidiyo ethandwa eJapan. UNikoniko noma uNiconico usho ukumomotheka ngesiJapan.
+ Ungalanda kanjani i-Anime Video kusuka kuNicovideo?
Ufuna ukubuka amavidiyo e-anime ungaxhunyiwe ku-inthanethi? Ungalanda amavidiyo e-anime kusuka eNiconico. INiconico ngenye yamawebhusayithi anime kakhulu eJapane.
Le webhusayithi iqukethe iziteshi eziningi kufaka phakathi i-Anime, Vocaloid, Ezokuzijabulisa, kanye noMculo. Kule webhusayithi, ungahlala uthole ama-movie e-anime athandwa kakhulu, uchungechunge lwama-anime namavidiyo e-anime ongawabuka mahhala, kufaka phakathi i-Naruto Shippuden, i-One Piece, i-Bleach, i-Dragon Ball Z, i-Fairy Tail, i-Skip Beat, i-Shugo Chara, i-Fullmetal Alchemist nokuningi. Futhi, iNicoNico iyindawo yeNo.1 yokuthola izingoma ezintsha kakhulu zeVocaloid ezilayishwe abakhiqizi baseJapan.
Uma ufuna ukulanda iNicovideo ukuze ubuke okungaxhunyiwe ku-inthanethi nganoma isiphi isikhathi futhi noma kuphi, udinga ukuthola umuntu ongathembekile waseNicovideo Downloader. Lapha sethula ukulandwa kwevidiyo yamahhala ye-NicoNico engcono kakhulu kuwe.
➥ Faka manje
+ Ungalanda kanjani i-NicoVideo ku-Mac ngaphandle Kokulahlekelwa Ikhwalithi?
Isilandi sethu seNicoNico sizokusiza ukuhlanganisa ngokuzenzakalelayo amafayela ukuze ugcine amavidiyo e-HD 1080p ephelele ngaphandle kokulahlekelwa yikhwalithi.
+ Ungalanda kanjani izingoma ze-Anime kusuka kuNicoVideo (Nico Nico Douga)?
I-NicoVideo noma i-NicoNico nje, iy iwebhusayithi eyaziwa kakhulu yokwabelana ngamavidiyo aseJapan efanayo ne-YouTube lapho abasebenzisi bangabuka khona amathayili wevidiyo yokuzijabulisa. Okuhlukanisa i-NicoVideo ku-YouTube ukuthi okuqukethwe okuningi ku-NicoVideo kugxile kusiko le-Japan pop (i-anime, imidlalo yevidiyo, amavidiyo womculo waseJapan pop njll).
Ngezikhathi ezithile, kwiNicoNico, kukhona amavidiyo ambalwa omculo we-anime anezingoma ze-anime kuwo owathandayo futhi ofuna ukubeka isidlali sakho se-MP3 noma ashise kwi-CD. Kepha ezinye zalezi azifani futhi kwesinye isikhathi akwenzeki ukulanda ingoma ngokwayo.
Kunezisombululo eziningi nezindlela eziningi zokulanda amavidiyo omculo kusuka ku-NicoVideo kepha okudingayo isiguquli samahhala seNicoNico MP3 esikuvumela ukuthi ulande amathrekhi omsindo nawomculo kusuka kusayithi levidiyo lamaJapan elidumile.
+ Ungawugcina Kanjani Umsindo Ophezulu Wekhwalithi kusuka kuNikovideo?
Isilandi seNicovideo sizothola ngokuzenzakalelayo futhi sikhombise isixhumanisi sokulanda umsindo esingu-192kbs esizotholakala kuwebhusayithi yeNicovideo.
+ Yini uma Ngingakwazi ukulanda amavidiyo kusuka ku-nicovideo.jp?
Uma ungakwazi ukulanda amavidiyo we-Nico Nico Douga ngqo, ungasebenzisa isoftware yokuqopha ividiyo ukuqopha amavidyo kliphu owadingayo.
+ Ngingadlala Yini ukulandwa kwevidiyo kudivayisi yami?
Ngokuvamile, ukulandwa kwevidiyo kuzolanda amavidiyo kusuka ku-nicovideo.jp kuya kumafayili wevidiyo we-MP4, futhi uyakwazi ukudlala amavidiyo alandiwe kudivayisi yakho yeselula ngaphandle kwenkinga.
+ Ngingabahlanganyela Yini Abalandiwe Video nabangane bami?
Ngemuva kokulanda amavidiyo ku-nicovideo.jp, ungathatha kuphela amavidiyo owasebenzisela wona, kepha ungawabelani ezinkundleni zokuxhumana noma uwuthumele ngqo komunye umngani.
+ Ingabe Ukulanda Ividiyo Kusindisa Ikhophi Lamavidiyo Alandiwe?
Iwebhusayithi yokulanda ividiyo, uhlelo noma uhlelo, ayigcini ikhophi lefayela osuzolilanda. Ngemuva kokulanda amavidiyo, ungenza ikhophi yevidiyo ngokwakho.
+ Kusemthethweni yini ukulanda amavidiyo ku-nicovideo.jp?
Kuya ngemibandela ye-nicovideo.jp. Kumavidiyo angenawo copyright, abasebenzisi bangawalanda ukuze basebenzise kahle; kumavidiyo avikelwe ilungelo lobunikazi, abasebenzisi kuyodingeka bacele izimvume ezivela kumnikazi wevidiyo.
+ Ungawalanda kanjani amavidiyo we-niconico njenge-mp4 1080p?
INicovideo ayinikezi ividiyo eyi-1080p ephelele yevidiyo njengefayela elilodwa, ngakho-ke udinga ukufaka i-NicoNico downloader ukulanda amavidiyo njenge-mp4 1080p.
+ Kungenzeka yini ukulanda amavidiyo / mp3 kusuka kuNicoNico Douga?
Faka isilandi se-NicoNico, ungalanda ividiyo oyibukele kwiNicovideo. Noma kunjalo, udinga ukungena ngemvume ukuze ukwazi ukubuka uchungechunge lwama-anime futhi ube ne-akhawunti ye-premium yokubuka amavidiyo wekhwalithi ye-HD.
+ Yini uNico Live?
I-Nico Live isevisi yokusakaza ye-inthanethi ebukhoma lapho abasebenzisi bangabuka khona futhi basakaze izinhlelo ezibukhoma futhi babhale futhi babuke amazwana sonke ngesikhathi sangempela.
+ Ungayilanda kanjani ividiyo ye-NicoNico ku-Android Smartphone noma ku-Iphone, Ipad?
Uma usebenzisa ifoni ye-Android, ungafaka isandiso sokulanda seNicoNico seFirefox. ➥ Faka manje
Uma usebenzisa i-iPhone noma i-iPad, udinga ukufaka isixhumanisi seNicovideo ebhokisini lokufaka ngaphezulu.
UNiconico Online Downloader - Landa i-Niconico Video and Audio to MP4 / MP3 Mahhala
Eminyakeni yamuva, abantu abaningi bakhala ngokuthi bahlala behlangabezana nezinkinga ezinjenge-network buffering noma ukuhlangana, ikhwalithi yevidiyo ephansi, imikhawulo ehlukahlukene, njll. Ngakho-ke, abantu bazimisele ukuthola isisombululo sokulanda amavidiyo eNiconico ukuze ajabule ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi! Unenhlanhla yokuba lapha.
Ngicabanga ukuthi kuyisengezo esilula, esilula futhi esihle kakhulu. Kungcono kuneNicofox.
Ithuluzi elihle lokusiza ukungilanda futhi ngilondoloze uchungechunge lwe-anime iqoqo lami.
Lesi sandiso singivumela ukuba ngilande iculo kusuka kuNico Nico Douga lula.
Ukulanda ividiyo kweNiconico 2021